Posted by ashin kusalasami on March 29, 2011
တန်ဇန်နှင့် အိကိဒိုဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးလေးနှစ်ပါး ခရီးအတူ သွားနေကြတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရွှံ့တွေဗွက်တွေ ထူလို့နေပါတယ်။ မိုးကလည်း သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေတုန်းပဲ။ ချောင်းဆုံလေးနားရောက်တော့ ပိုးသား ကီမိုနိုဝတ်စုံလေးနဲ့ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်ကြတယ်။ ရေတွေက ကြီးနေတော့ ကောင်မလေးက ချောင်းကို ဖြတ်မကူးရဲဘူး။ တန်ဇန်ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးလေးက ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ “ကောင်မလေး … လာ”ဆိုပြီး တစ်ဖက်ကမ်းကို ပွေ့ခေါ်သွားခဲ့တယ်။
အီကီဒိုဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးလေးက တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကြောင်းကို ဘာမှ ဖွင့်မပြောခဲ့ဘူး။ သူတို့နေတဲ့ ကျောင်းကို ရောက်ပြီး ညအချိန်အထိပဲ။ စိတ်ထဲမှာ တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ မမြိုသိပ်နိုင်တော့လို့ “ဟေ့.. တန်ဇန်၊ မင်း နေ့ခင်းက ကောင်မလေးကို ပွေ့ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းကို ပို့ပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့ ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာ မိန်းကလေးတွေကို ကိုင်လို့ မရဘူးလေကွာ၊ အထူးသဖြင့် မင်းပွေ့ခဲ့တဲ့ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေကိုပေါ့။ ဒါ တအား အန္တရာယ်ကြီးတာ သိရဲ့သားနဲ့၊ မင်းဘာလို့ လုပ်ခဲ့တာလဲ”လို့ ပြောပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ တန်ဇန်ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးလေးက “အော် ….. ငါက ကောင်မလေးကို တစ်ဖက်ကမ်းကနေ ပွေ့ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ထားခဲ့ပြီလေကွာ၊ မင်းက ကောင်မလေးကို အခုထိ ပွေ့ထားတာကိုးကွ”လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ သင်တန်း တက်ခဲ့စဉ်က မကြာခဏ ကြားရတတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဆရာကြီးက လူ့စိတ်အကြောင်း ပြောတိုင်းလိုလို ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ထည့်ပြောတတ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးက တိုတိုလေးပေမယ့် အားပြိုင်မှုက အပြည့်၊ စဉ်းစားစရာ၊ အငြင်းပွားစရာတွေက အပြည့်ပါပဲ။ ယုတ္တိနည်း(logical)နဲ့ စဉ်းစားမလား၊ စိတ်ပညာ (Psychological) နည်းနဲ့ပဲ ပြောကြမလား။ ဒဿနိကဗေဒ(Philosophy)နည်းနဲ့ပဲ ဆိုကြမလား။ ဗုဒ္ဓ၀ိနည်းနဲ့အညီ ဆွေးနွေးကြမလား။ အများကြီးပါပဲ။
ဒီပုံပြင်လေးကို ပြောပြပြီး တရုတ်ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းသားသုံးယောက်ကို မေးဖြစ်တော့ သူတို့က တန်ဇန်းဘက်က အပြည့်အ၀ ရပ်တည်ပါတယ်။ 100% လုံးဝ မလျှော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့အထဲမှာ စကားတစ်ခွန်းက မျက်လုံးပြူးစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ “တန်ဇန်ကို ရှုတ်ချဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဘယ်ဆင်ခြေကိုမှ အထင်မကြီးဘူး”ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
တစ်နေ့ ကျောင်းမှာ ပရိတ်ရေ ဖြန်းပေးနေတုန်း အီရန်ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားတွေ ရောက်လာတယ်။ အဲဒီထဲက ဘာသာရေးတွေအကြောင်း ကျမ်းရေးနေတယ်ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ယောက် ပါလာတယ်။ ဖော်ဖော်ရွေရွေပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံရေးအကြောင်း စရတာပေါ့။ အမာဒီနီဂျက်ကို ကြိုက်လားဆိုတော့ စက်ဆုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ငါမေးသမျှ အီရန်လူမျိုးတိုင်းက အမာဒီနီဂျက်ကို မကြိုက်ဘူး ပြောကြတယ်။ ဒီလိုဆို ဘာလို့ သူ့သက်တမ်းက ရှည်နေရသလဲ”ဆိုတော့ “မင်းတို့ နိုင်ငံကော မင်းတို့ အစိုးရကို ကြိုက်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့ စစ်အစိုးရ သက်တမ်းရှည်နေတာလဲ”တဲ့။ ပြီးရော။
“မင်းကျမ်းက ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ဘာတွေ ပါမှာလဲ”လို့ မေးဖြစ်တော့ “ဗုဒ္ဓဆိုတာ (၃၇)ပါးမြောက် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း……….”စသဖြင့် ပြောနေပါတယ်။ “ဟေ့ နေပါအုံး …. မင်းပြောနေတာ မှားနေတယ်၊ မင်းပြောတဲ့ ၃၇-မင်းနတ်ဆိုတာ သိပ်အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ နတ်တောင် မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်က သိရတာလဲ၊ ဘယ်ကအချက်အလက်တွေလဲ”လို့ မေးတော့ သူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေ အွန်လိုင်းကနေ ပို့ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဒါမဟုတ်ဘူး။
“ဒါနဲ့ မသိလို့ မေးချင်တယ်၊ မင်း မိန်းမရှိလား”တဲ့။ “ဟဟဟ… ဒို့က မိန်းကယူလို့ မရဘူး”…..အဖြေက ဒီလောက်နဲ့ မရပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး…..“မိန်းမဆို သူတို့အသားကိုတောင် ထိလို့ မရဘူး”လို့ ဆိုတော့ “ဒါဆိုရင် စောစောက မင်း ကောင်မလေးတွေကို ပရိတ်ကြိုးတွေ ချည်ပေးနေတာ သူတို့လက်ကို ကိုင်နေတာပဲ”တဲ့။
အဲဒီစကားလေးကို အွန်လိုင်းကနေ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောနေဖြစ်တယ်။ “ငါကွာ … အဲဒီစကားကို ဘာမှ မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး”လို့ဆိုတော့ “မင်းကလည်း ဘာခက်တာမှတ်လို့၊ သာယာတဲ့စိတ်မဖြစ်ရင် ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူး”လို့ ဖြေလိုက်ပြီးတာပဲလို့ အကြံပေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အကြံပေးသလို ဖြေဖို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ချောလှနေတဲ့ ကောင်မလေး လက်ကို ကိုင်တာ မင်း နည်းနည်းကလေးမှ သာယာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလား”လို့ မေးလာရင်…..ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မဖြေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ငယ်ငယ်က စာသင်တိုက်က ဆရာတော် မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကလည်း ကြားယောင်လို့ပေါ့ “ထက်ထက်မိုးဦးက ပန် ပန် ပန်ဆိုပြီး ပြုံးပြနေတာကိုမှ မင်း ကြည့်မကောင်းဘူးဆို မင်း ဂန်ဒူးလားကွ”။
ပီနန်းဆရာတော်ကြီး ပြောပြောနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ခါက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ၀ိနည်းအရာမှာ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်တဲ့။ ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးကလည်း ၀ိနည်းကို အရမ်း တတ်ကျွမ်းချင်နေတာ။ နောက်ဆုံး ၀ိနည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးနေတဲ့နေရာကို သိသွားခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ ဦးဇင်းလေးဟာ ဘုန်းကြီးနေတဲ့ကျောင်းကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ဘုန်းကြီးကို မတွေ့တော့ လိုက်ရှာတယ်။ နောက်ဆုံး ၀ိနည်းဘုန်းကြီးက သရက်ပင်ပေါ်မှာ ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး သရက်သီးခူးနေတယ်တဲ့။ ဦးဇင်းလေးကို လှမ်းပြောလိုက်သေးတယ် “ဒီတောင်းပြည့်ရင် ဆင်းခဲ့မယ်ဟေ့”တဲ့။ ဦးဇင်းလေး စိတ်ညစ်သွားတယ်… (သရက်သီးခူးတာ ၀ိနည်းအရ အပြစ်ရှိတယ်။)။ သရက်ပင်ပေါ်က ဆင်းတော့ ဦးဇင်းလေးကို ရှင်းပြတယ်။ “ဦးဇင်းလေး…. ဦးဇင်းက ၀ိနည်းတတ်ချင်တာလား၊ ၀ိနည်းကျင့်ချင်တာလား။ ၀ိနည်းတတ်ချင်ရင် ကျုပ် သင်ပေးမယ်။ ၀ိနည်းကျင့်ချင်ရင် ကျုပ်ဆီမလာနဲ့”တဲ့။ ဦးဇင်းလေး သဘောကျသွားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ၀ိပဿနာနာမည်ကြီး ဆရာတော်တစ်ပါး အနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကို ရောက်သွားတယ်။ သူဟောဟောနေတာက ၀ိပဿနာ၊ အရာရာဟာ မမြဲဘူး။ ဆင်းရဲတယ်။ အစိုးမရဘူး။ ဘာကိုမှ တွယ်တာမနေနဲ့။ ဒီလိုပဲ အမြဲဟောတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ကြည်ညိုဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်။ အမြဲတမ်း သင်္ကန်းလေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး။ အပြောအဆိုက တကယ့်ကို တရားထူး ရထားသူတစ်ယောက်လို။ စကားပြောရင် အေးအေးကလေး၊ ယဉ်ယဉ်ကလေး။ ၀ိနည်းလည်း လေးစားတယ်တဲ့ (လူတွေ အဆို)။ သူက ပိုက်ဆံ မကိုင်ဘူးတဲ့။ စာအိတ်ကိုတော့ ထိတယ်။ (ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရီရဆုံး ဟာသပြကွက်တွေပေါ့)။ အခု သူ မြန်မာမှာ ကျောင်းလုနေတယ်။ အမှု မပြီးသေးဘူး။ ဘာမှ မမြဲဘူးတရားကိုတော့ ဆက်လက်ဟောနေဆဲပဲ။ ကြည်ညိုဖွယ်အမူအရာလေးတွေတော့ လုပ်နေဆဲပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက သူဟာ အမူအရာနဲ့အကျင့် တစ်ခြားစီပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းဟာ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (အမြင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး)ရဲ့ အဓိက ကိစ္စတစ်ရပ်လို ဖြစ်နေတယ်။
ဘုန်းကြီးလေးနှစ်ပါးကနေ စလာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်ကြည့်ရအောင်။ စာဖတ်သူကော တန်ဇန်အမြင်နဲ့ အီကီဒိုအမြင် …. ဘယ်အမြင်ကို လက်ခံနိုင်မလဲ။ (ဆင်ခြေတွေ မထည့်ဘဲ သာမန် စဉ်းစားခြင်းပေါ့။ ဥပမာ … ကူညီမယ့်သူ ပေါ်လာမှာပါ၊ သူ မကူလည်း တစ်ယောက်ယောက်က ကူမှာပါ…စသဖြင့်ပေါ့။) အီကီဒိုကတော့ မြန်မာဘုန်းကြီး အများစုနဲ့ တူနေမယ်ထင်တယ်။ သူက စာအုပ်ထဲကအတိုင်း လျှောက်ပြောတတ်သူ။ တကယ်မကျင့်ဘဲ စာအုပ်ကြီးနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူ။ တန်ဇန်ကတော့ ဗြဟ္မစိုရ်နဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးသူ။
ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောတဲ့အခါ ဒီထက် ပိုမိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူး၊ စိတ်ထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူး ဒါကိုပြောတော့ပေါ့ ဘုန်းဘုန်းရ။ ဒီပုံပြင်လေးကိုတော့ သိပြီးသားပါ သြော် ဒီစိတ် ဒီစိတ်။
သူငယ်ချင်းရေ ကိုယ့်အမြင်ပြောရရင်ကွာ ဘာမှ ခဲယဉ်းပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘဲ ဓမ္မပဒထဲက ဂါထာအဖွင့်တစ်ခုမှာ အဟံ ပုရေ၊ အဟံ ပုရေ တဲ့။ ကုသိုလ်အရာမှာ ငါသည်ပထမ၊ ငါသည်ပထမ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပါတယ်လေ။ ဒီတော့ ကုသိုလ်ရဖို့ အခွင့်အရေးကိုယ့်နားရောက်လာပြီပဲ ကိုယ်ယူလိုက်တော့ ကိုယ်ရသွားတာပေါ့။ ကိုယ်မယူ သူများယူလိုက်တော့လည်း သူများရမှာပေါ့လို့ပဲ တွေးမိတယ်။ သူငယ်ချင်းရေ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေနော်...မကြာခင်တို့ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတော့မယ်...
ဆိုလိုချင်တာက သူဟာ အမူအရာနဲ့အကျင့် တစ်ခြားစီပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းဟာ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (အမြင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး)ရဲ့ အဓိက ကိစ္စတစ်ရပ်လို ဖြစ်နေတယ်။ ( melting heart down ) :D
အလွန်တရာမှ ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးချက်ပါပဲဘုရား...နောက်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေကို ဘာသာရေးနဲ့သာမက စီးပွားရေးနဲ့
လာဖတ်သွားပါတယ်ဘုရား။ တရားသဘော အစစ်အမှန်ကို ဥပမာနဲပ နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြထားတာ သဘောကျပါတယ်ဘုရား။
wonderful article with sharp sample. I can't help commenting after read this.
Good job, carry on Bhante !
ရေမကူးတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး
လေးကို ကူညီခဲ့တာဟာ ၀ိနည်းအရ သာယာရင်